जनवरी मा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
जनवरीमा जापानको टोकियोमा मेजी जिंगु तीर्थमा हात्सुमोडको भीड। हाट्सुमोडे जापानी नयाँ वर्ष = शटरस्टकको पहिलो शिन्टो मन्दिर वा बौद्ध मन्दिर भ्रमण हो
जापान मा जनवरी! जापानको जाडोको उत्तम मजा लिनुहोस्! >
जनवरीमा, टोकियो धेरै चिसो छ, त्यसैले तपाईंलाई कोट वा जम्पर चाहिन्छ। मौसम अनुरूप छ र तपाइँ एक राम्रो घामको दिन अधिक अक्सर अनुभव गर्नुहुनेछ। त्यहाँ लगभग कुनै हिउँ छैन, तर यदि यो सुन्न गयो भने रेल सेवा निलम्बन हुन सक्छ। यस पृष्ठमा, म जनवरीमा टोकियो मौसम डेटा छलफल गर्नेछु। यो जानकारी को माध्यम बाट, म आशा गर्दछु कि तपाईले जनवरीमा टोकियो मौसमको एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। यदि तपाइँ अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने लेखमा क्लिक गर्नुहोस्।
तल जनवरीमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो र टोकियो जान चाहानुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ।
जाडोको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जनवरी मा टोकियो मा मौसम (अवलोकन)
टोकियो मौसम जनवरी (२०१)) को सुरूमा
टोकियो मौसम जनवरी (२०१)) को बीचमा
टोक्यो मौसम जनवरीमा (२०१))
ग्राफ: जनवरी मा टोकियो मा तापमान परिवर्तन
टोकियो जनवरीमा धेरै चिसो छ। होक्काइडो जस्तो हिउँ धेरै छैन, तर त्यहाँ त्यस्तो दिनहरू छन् जब सबै भन्दा कम तापक्रम ठण्डा भन्दा कम हुन्छ। दिनको समयमा पनि, प्राय: व्यक्ति बाहिर कोट बिना बाहिर धेरै समय खर्च गर्न सक्दैन।
यो जनवरी मा धेरै वर्षा छैन। यसको सट्टामा तपाईले धेरै राम्रा नीलो स्काईहरू आशा गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने वर्षा हुँदैन, हावा सुख्खा छ। केहि मानिस चिसो लाग्छ किनभने तापमान कम छ र हावा सुख्खा छ।
हिउँले विरलै वर्षा हुन्छ, तर एकचोटि यो शहरको केन्द्रमा यातायात गडबडी हुनेछ। शिन्कानसेन ढिलाइ हुन सक्छ, कृपया खराब मौसमको समयमा इन्टरनेट आदिमा ट्राफिक जानकारी प्राप्त गर्न कोसिस गर्नुहोस्।
न्यूनतम वायु तापमान -1.4
कुल वर्षा 9.5 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 69%
जनवरी,, २०१:: टोकियोको असकुसामा हात्सुमोडेको भीड, हत्सुमोडे जापानी नयाँ वर्ष, टोकियो = शटरस्टकको पहिलो शिन्टो मन्दिर वा बौद्ध मन्दिर भ्रमण हो।
जनवरीको सुरूमा, टोकियोमा बिहान र साँझको कम तापमान करिब १-२ डिग्री सेल्सियस रहनेछ। दिनको अधिकतम तापमान पनि १० डिग्री सेल्सियसको आसपास रहन्छ।
यस समयमा त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो नयाँ सालको प्रार्थनाका लागि मन्दिर र मन्दिरहरूमा जान्छन्। मौसम धेरै राम्रो छ।
जनवरीको सुरूमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव 6::51१ र सूर्यास्त समय लगभग १:16::41१ हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 13.7
न्यूनतम वायु तापमान -1.6
जनवरी १ 14 2018: जापानीले शिबुया सडक, टोकियो, जापान = शटरस्टकमा सडक पार गरे
यो जनवरीको बीचमा चिसो हुनेछ। मौसम अनुकूल छ र तपाईं घमाइलो दिन परिवर्तन बिना रहनेछ। यस समयमा हावा सुख्खा छ।
किनकि यो चिसो र सुक्खा छ, अधिक व्यक्ति चिसो पक्रनबाट बच्न मास्क लगाउनेछ।
जनवरीको मध्यमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव ::6० र सूर्यास्त समय लगभग १:50::16१ हुन्छ।
न्यूनतम वायु तापमान -4.0
जनवरी २,, २०१.। जापानी विशिष्ट पोशाकमा केटीहरू, Asakusa, टोक्यो = शटरस्टक
टोकियो जनवरीको आखिरी देखि फेब्रुअरीको शुरुमा सबैभन्दा चिसो छ।
जनवरीको अन्तमा, तपाईं समान सुख्खा मौसम र धेरै सुख्खा हावाको साथ चिरस्थायी घाम दिनहरू आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
जनवरीको अन्तमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव 6::46 हुन्छ, र सूर्यास्त समय लगभग १ 17::01० हुन्छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले जनवरीको सुरूको लागि 2019th औं समय, जनवरीको मध्यमा १5औं समय र जनवरीको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरें।
"जनवरी" मा फर्कनुहोस्